ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် အာရှလမ်းမကြီးဖွင့်ပွဲနေ့မှာ လက်တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ် လို့ DKBA ပြော
ွှုအဲသလို တိုက်ရင် အစိုးရကလဲ မျက်နျာပျက်ပြီး နင်တို့ကိူ အလုံးအရင်း နဲ့ အပြတ် ရှင်းမှာပေါ့
Jul 18, 2015 06:04 PM
this case mostly depends on the government and military. GOVt cannot give commands to military, so how armed ethnic groups will stay. Solve first,and then must get agreement with them. If do this,will not beaproblem. respect is most important
Jul 18, 2015 06:00 PM
ယင်းနိုင်ငံများ၏ ကုန်စည်များဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းေ းသည် အစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်၊ယင်းအတွက်အစိုးရမှ ညေးမဖြစ်စေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုံခြံ ုရေးနယ်နမိတ်ကိုအာမခံချက်ရှိအောင်လုပ်ရပါသည်။ ယင်းသို့ပြောလိုက်ခြင်းသည် DKBAအဆင့်သည့် မယဉ်ကျေးသည့် လူ့အဖွဲစည်းအဆင့်သာသာသာရှိကြောင်းထင်ဟပ်စေပါသည်။ပထမဆုံးအကျိုးခံစားရမည်မှာ ကရင်လူမျိုး ပြည်နယ်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သင့်သည်။ ရေရှည်ကိုကြည့်ပါ
Jul 17, 2015 10:46 PM
mars နေရပ်- YGN :
Fxxxx that SOB,,, need to "disappear from earth" civilization,, uneducated, destructive minded, low level DKBA people...
ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘယ်လက်ခံမလဲ
တိုင်းပြည်Imageနဲ့ဆိုင်ပီး ဖွင့်ပွဲ မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အကြီးကဲတွေ တစုံတခုဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးသလိုဖြစ်မှာပေါ့
အခုလိုပြောနေတာက လမ်းဘေးစကားပဲ၊ အခုအာရှလမ်းမဖွင့်ပွဲက မြန်မာတခုထဲနဲ့မကတော့ဖူး ၊ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပါဆိုင်သွားပီ၊အခုက ဂိတ်ကြေးကောက်လို့မရတော့တာနဲ့ ယင်းဆက်စပ်နယ်မြေကနေဆုတ်ခွာရတာနဲ့ကလေးဆိုးလိုလုပ်လို့မရဖူးလေ၊ကုန်စည်စီးဆင်းလာရင်အခြားနိုင်ငံကကုန်ကိုပါ မြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူရတော့မှာ